Jason Tian (na Jie Tian amin'ny teny sinoa Pinyin) dia efa nanolotra serivisy ara-dalàna mifandraika amin'ny vahiny amin'ireo mpanjifa hatramin'ny taona 2007, ary niasa tao amin'ny orinasa mpampanoa lalàna faratampony any China hatramin'ny andro toa ny Beijing Zhonglun Law Firm, Office of Shanghai ary Beijing Zhongyin Law Firm, Office of Shanghai, Beijing Dentons Law Firm, Office of Shanghai, ary mpiara-miasa amin'ny Office Landing Law Office ankehitriny. Niasa ho mpandika lalàna ambony taloha tao amin'ny orinasan-dalàna mega anglisy, Clifford Chance LLP's birao solontena Shanghai izy talohan'ny nandraisany ny asany ara-dalàna.
Manoro hevitra ny mpanjifa avy any Etazonia ny amin'ny lova fananana ao Shina navelan'ny mpandraharaha manana karatra maintso, ao anatin'izany ny fizarana, fananana, zon'ny fifanarahana (voafidy amin'ny hetsika);
Manoro hevitra ny mpanjifa avy any Etazonia momba ny fitantanan-draharaha mifandraika amin'ny fitokisana sy ny fahatokisan-tena napetraka any Etazonia;
Manolora mpanjifa am-polony amin'ny fananan-tany amin'ny fananan-tany any Shina amin'ny alàlan'ny fanamarihana ny zon'ny lova any Shina, ao anatin'izany ny fandaminana ny hetra amin'ny fotoana mety;
Manoro hevitra ny taranaky ny Sun Yat Sen momba ny fananana zaridaina zaridaina any Shanghai izay mitaky fandoavana ny vola aloa amin'ny tany, ary fanampiana amin'ny fivarotana ilay trano mitentina mihoatra ny RMB 100 tapitrisa;
Misolo tena ny mpanjifa amin'ny fifanolanana amin'ny fananan-tany any Shina ary miaro ny zon'izy ireo sy ny tombontsoany any amin'ny fitsarana;
Mamoaka hevitra ara-dalàna maromaro any amin'ny tribonaly ivelany momba ny China Marriage
Mpampianatra ao amin'ny sekolin'ny lalàna ao amin'ny University of East China University of Science and Technology Affiliate mpikambana ao amin'ny STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)
Mamoaha lahatsoratra ara-dalàna momba ny lalàna sivily sy fandraharahana ao Shina amin'ny bilaogy: www.sinoblawg.com
Firenena misahana ny fisaraham-panambadiana any Sina, Solontenan'ny orinasa China, Orinasa misahana ny lalàna momba ny fianakaviana any Sina,